Sunday November 22, 2009 - 01:14:20 in Community Listing by Super Admin
<b> Kadib markii Madaxda hay.adda COGWO Kula xariirtey Abdi Muuse Maaxaay Qadka telephoonka ayaa waxaa loo sheegay in uu jiro Canug yar oo madaxa biyo kaga jira oo u baahan xaalad caafimaad oo deg ah.<b/>
Wednesday, January 07, 2009 - Muqdisho: Ahmed Adan Abdi 00:24 Hour guduhood gurmad caafimaad lagu geeyey Kenya iyo hay.adda cogwo oo ugu baaqeysa dadka xaaladoodu liidato ee dalka gudhiisa wax looga qaban waayey in ay la soo xiriiraan.
Waxaa arintaan iska kaashadey COGWO iyo Abdi Muuse Maaxaay oo ah u shaqsi caawiyo dadwaynaha Somaliyeed ee dhibaataysan waxayna u sameeyeen gurmad caafimaad.
Sahro Maxamed Axmed Dhamaan umada somalilyeed waxaan ugu baaqeynaa in ay fiiryaan dhibaatada heysata caruurta iyo haweenkasahro ayaa ku dartay intaa arintaa hooshaloo fiiriyo nabadana ha lagu dadaalo xili ay sagootineysay hooyo soomaliyeed oo wiilkeeda dalka gudihiisa wax looga qaban waayey loona dulinayey isbitaalka kajaba eek u yaal dalka Kenya.
Gudoomiyaha hay.adda cogwo Sahro Maxamed Axmed canugaan yar waa kii 20aad ee aan ku guleysano una qaadno kajaba hospital iyo kuwo kale oodalka dibadiisa ah ka dib markii dhaqaatiiru wax ka qaban waayeen.
Cuduradaan ayaa waxay ka dhashaan baaruuda iyo rasasta urta ka timaada oo iyaga laga sameeyo waxyaabo kiimiko ah si ay naflayda u dhibaateyaan.
Dalka somaliya ayaa wheel u noqday ridida xabadaha iyo madaafiicda waxaana sahlan in aad aragto qof la dilay, la dhaawacay ama madfac uu ku dhacay dabadeedna cad cad u kala go.ay waxaana soo badanaya cudurada ka dhasha baruudka faraha badan iyo qaraxyada inta ay ku dhacaan waxaa u sii dheere cudurada laga qaado sida ay xaqiijiyeen in badan oo ka mid ah dhaqatiirta fara ku tiriska ah ee joogo dalka gudihiisa.
Maama sahra ayaa u mahad celisay Maaxaay iyo kooxdiisa samafaasha ah reer maraykan kuwaas oo suurta galiyey in uu meel mar noqdo gargaarkaan deg deg ah ee loogu gurmanayey wiilkaan la ildaran xanuunka dalka gudihiisa wx looga qaban waayey.
Sidoo kale sahra ayaa ilaah uga bariday in uu wiilkaan oo caafimad qaba uu dalka dib ugu soo laabto .waxayna shegtay in dhamaan dadkii ay qaadeen lagu guuleysta daaweytooda marka laga reebo Xasan Cali Isaaq oo dhawaan loo qaaday dalka Kenya cudurka haayana la cadeeyey in aan waxba laga qaban Karin.